Izvo wedzera-Ons yaungada kuti yoku-?
1 gore 9 ago #614 by rikoooo
Ndiri kuisa shoko iri kuziva wedzera-Ons iwe zvikurukuru uchida akagadziridzwa, sezvo ndiri Parizvino kuenda dzifambirane vashoma, mungadai kubatsira zvikuru ini kuziva izvo zvaunoda kupfuura.
Uye nenzira, unogona kupa kana ini kubatana kuti yoku- version (kubva imwe Website) zvaizova zvakazonaka.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: Gh0stRider203, Jodsalz1, Bubble @ Sheep
1 gore 9 ago #615 by Dariussssss
OK pakutanga kwezvose, zvimwe zvikanganiso ...
A320 Mega Pack, inoramba kurovanya. Ndicho kusagadzikana chaizvo pamusoro wangu FSX, handizivi sei.
Thomas Ruth A330 / 340, PFD haasi kuratidza zvose mudanga uye overspeed ... zvachose.
Emirates nezvikepe, dzakaipa kwazvo the, abondera FSX wangu ...
Possible inogadziridza ...
Zvakanaka, zvingava zvinofadza kuti zvimwe batanidza zviri A330 / 340 kubudikidza TR, pamwe A320 Mega Pack, zvakawanda chaizvo kubatanidza mashoko nzvimbo yemutekenyi inova kwazvo.
A380, chetezvo, PFD haasi kuratidza zvose mudanga uye overspeed.
Kana Ndinorangarira zvimwe, ndichauisa pano.
1 gore 9 ago #616 by Gh0stRider203
Dariussssss, ndizvo zvose zvikuru nyore parumananzombe !!!
1) Uninstall wenyu Airbus ndege;
2) Kudzima chinhu Airbus
3) Tsiva pamwe Boeing
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: denpic
1 gore 9 ago #617 by D115
Ndinoda kuona Boeing 757 aine unhu VC nguva mune ramangwana. Ndinofunga 757 akaita vakanzvenga FSX zvakanaka zvakanaka.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: Bubble @ Sheep
1 gore 9 ago #619 by Gh0stRider203
D115 akanyora: ndinoda kuona Boeing 757 aine unhu VC nguva mune ramangwana. Ndinofunga 757 akaita vakanzvenga FSX zvakanaka zvakanaka.
KANA uri kuda kupedza $, asi Quality Wings 757 ari chaizvo vakadzikama
1 gore 9 ago #649 by julian1245
Nokuti dzimwe dzezvirwi dzinoita kuti injini dzifambe nokuti dzinongoratidzika zvakashata kana dzisiri kutendeuka #realism
1 gore 8 ago #669 by Macca22au
Sezvo vazhinji vanovandudzwa kuP3D4 sezvinobvira, uye VCs zvachose.
Asi ichitsvaga kuV4 iyo A320 uye B737-800 pakarepo apo munyori anofadza ......
1 gore 8 ago #671 by Jakedertree
Ndingada VC iri nani kune Airbus A400M. Uyezve, kana munyori angakwanisa kupa mamwe mazano kuti aite zvishoma pane ruoko rakazara pasi, izvo zvingashamisa. Inomira HARD, uye ini handigoni (uye handizivi) kuwana nzira yekuderedza injini panguva yekatekisi.
1 gore 8 ago #673 by Sergiozaki
Iyo Boeing 777 pls yeP3D v3 / v4
Full kushanda VC Panel plss ...
1 gore 8 ago #674 by Sergiozaki
IA380 P3D v3 / v4
Gauges panels, VC chaiyo ye380's